အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: မိုက်ခရိုဝေဖ့်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, December 22, 2010 Wednesday, December 22, 2010 Labels: သုတအဖြာဖြာ
26 Responses to “မိုက်ခရိုဝေဖ့်ရဲ့ ဆိုးကျိုးများ”
ရင်နာစွာနဲ့ ဖတ်ရတော့မှာပေါ့ ဟိုနေ့ကမှ
အသစ်တလုံး ပြန်ဝယ်ထားတာ :( :( :(
ဟုတ်.... အသက်ရှည်ရာအနာမဲ့ရေးအတွက် တန်ဆေးလွန်ဘေးဆိုတဲ့စကားလေးနဲ့ ထိန်းညှိပြီး နေထိုင်အသက်ရှင်သင့်ပါတယ်.... ဒါနဲ့ မချောရေ.. မနေ့က မချောဆိုဒ်ကို ၀င်လို့မရပြန်ဘူး... အဲလိုဖြစ်နေကျလား... ကျွန်တော်ခဏခဏကြုံဖူးလို့.... အဲရာက ဒီဆိုဒ်ကို Support မလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စာတွေတက်လာတယ်....
အယ်.. အဲလိုကြီးလား.. ကြောက်စရာပဲ.. ရှောင်မှဖြစ်မယ်.. ကျေးဇူးနော်..း)
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ မိုက်ခရိုဝေဖ့်ပါလား..။ အလွယ်တကူလုပ်လို့ရပေမယ့်
ဘယ်အရာမဆို အလွန်အကျွံ သုံးစွဲရင်တော့ ဘေးတွေ့စေတာပါပဲလေ ။
မိုက်ခရိုဝေ့က အဆင်ပြေတာတော့ တော်တော်ကို အဆင်ပြေစေတာပါ ။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒါမရှိလဲ ဖြစ်ပါတယ်လေ ။ အဲ့ဒါကြီးက ပိုအဆင်ပြေစေတာတခုပဲမို့ မရှိမဖြစ်တော့ မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတယ် .. ညီမလေးနားလဲ ခုမရှိနေဘူး ။ အဲ့ထက်အရေးကြီးတာတွေ ဝယ်နေရတာနဲ့ အဲ့ဘက်ကို မရောက်ဘူးဖြစ်ဖြစ်နေတယ် ။ ခုတော့ ချောပို့စ် ဖတ်ပြီ သေချာတဲ့ ဆင်ခြေ တခုထပ်ရသွားသလိုပဲး))
မမဘေဘီလိုပဲ ဟိုတလောကမှ အသစ်တစ်လုံး ရထားတာ.. အခုမှ စမ်းသပ်ချက်တဲ့ အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်.. ခိခိ.. ဟင်းချက်ပျင်းတဲ့အခါပဲ သုံးမယ်လေ..
We must take care about it.
Thanks sis... !
အင်း မဝယ်နိုင်တာနဲ့ အတော်ဘဲ ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွ
အကျိုးရှိတဲ့ ပိုစ့် လေးအတွက် ကျေးဇူးဘဲ
အွန် ........ ခုဘဲ ၀ယ်လာတာ ... ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့ ..း(
အခုခေတ်ကြီးမှာက နည်းပညာတွေ တိုးတက်သလောက် အဲ့ ဒီ
နည်းပညာတွေနဲ့ ပဲ လူတွေလျှောနေကြတာလေ ၊
ဘာပဲစားစား၊ဘာပဲသောက်သောက် နည်းပညာတွေနဲ့ ကိုမလွတ်တော့ 
အခု လူတိုင်း“ ကင်ဆာ ” မျိုးစုံနဲ့ ပဲ လျှော လျှောနေကြတာလေ။
ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်၊ ဒီပို့ (စ)ကို။
ဒီကိစ္စ လူတိုင်း သိသင့်တယ်နော်
ဘာလို့ဆို မြို့နေ လူတန်းစား တော်တော်များများက မိုက်ကရိုဝေ့နဲ့ မကင်းနိုင်ကြလို့
ခေတ်ပေါ်ပစ္စည်းတိုင်းလိုလိုမှာ ကောင်းကျိုးနဲ့ဆိုးကျိုးဒွန်တွဲနေတဲ့သဘောတွေ ပါနေတယ်နော်...။
အခုလို ဝေမျှတာ ကျေးဇူး မချောရေ ...
ကျန်းမာပါစေမင်္ဂလာပါ။ ကောင်းလိုက်တဲ့ပညာပေးကလေးဗျာ ဘယ်လိုကျေးဇူးတင်ရမယ်တောင်မသိတော့ပါ
ဘူးခင်ဗျာ ရင်ထဲကကိုတကယ်တင်သွားပါတယ် ချောကိုခဏခဏကျေးဇူးတင်ရတာတွေများနေပါပြီ။
ဆိုးကျိုးလေးတွေ သိရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကိုယ်
ကတော့ မိုက်ကရိုဝေဖ့်နဲ့ ဟင်းတော့ မချက်ဖြစ်ပါဘူး။
နွေးတာလောက်ပဲ ရှိတာပါ။ အဲ့ဒါရော ဆိုးကျိုးရှိလားဟင်
ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို တရားစွဲရမယ် :)
မကြိုက်တာနဲ့ အတော်ဘဲ။ ကျေးဇူးနော်။
ဒါတွေ သိလို့ ဝယ်ကို မဝယ်ဘူးနော်။ တစ်ယောက်တည်းနဲ့ ဟင်းချက်ဖို့ အချိန်မပေးနိုင်လို့ အပြင်ကပဲ ဝယ်စားနေတာ နှစ်လတောင်ရှိပြီ။ ဒီနေ့မှ ဝင်ဖတ်လို့ရလို့ အခုမှ မန့်ခွင့်ရပါတယ် ချောရေ။
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဝေမျှတာ ကျေးဇူးပါနော်
အကောင်းနဲ့ အဆိုး ဒွန်တွဲနေတာပါပဲ။
အလုပ်ပြန်ချိန် တအားနောက်ကျနေတော့လည်း ဆိုးကျိုးရှိမှန်းသိသိနဲ့
ချက်ဖြစ်တာတွေလည်း ရှိမှာပါ။ ဒါပေမယ့် အခုလို အဆိုးအပြစ်တွေကို
သိထားရတော့ တတ်နိင်သလောက် ဆင်ခြင်လို့ရတယ်။
ဒါက ဒီပို့စ်ရဲ့ တန်ဖိုးပါပဲ။
မမချောရေသိသွားပြီ ၀ယ်တော့ဖူး အစကတည်း ကမ၀ယ်နိုင်တာလေ ခုတော့ မ၀ယ်နိုင်လို့ဟုတ်ဖူး အန္တရာယ် မကင်းလို့ လို့ပြောလို့ရသွားပြီလေ ဟဲ……..
Thanks so much for sharing knowledge.